Maktabadda McKnight waxay u gudubtaa nidaam lacag bixin oo elektaroonik ah. Nidaamka cusubi wuxuu noo oggolaan doonaa inaan lacag siinno ganacsatada si deg deg ah iyo si ka duwan sida aan hadda u awoodno. Marka la baarayo habka lacag bixinta elektaroonigga ah, waxaan ka helnay talooyin ka yimid dhowr ka mid ah mushahar bixiyeyaasha. Si aad ah, kuwa la soo xiriiray waxay ahaayeen kuwo ku saleysan helitaanka lacagaha elektarooniga ah. Intaa waxaa dheer, isbedelku wuxuu ka turjumayaa ujeedada McKnight ee degaanka (warqad yar!), Waxaanan ku kalsoonahay inaan ku shaqeyno heer sare, waajibaadkeena inaan ahaado maamulayaal wanaagsan oo ah khayraadka aasaasiga ah, iyo waajibaadkeena intaa ka sii dheer si aan u siino bixiyeyaashayada isla markiiba bixinta lacagahooda iyo adeegyadooda. Laga bilaabo Janaayo 2012, lacagaha Aasaasiga ah ee iibiyaasha Maraykanku waxaa lagu sameyn doonaa Guriga Kajinta Qorsheynta (ACH), oo ah shabakad amaan ah oo isku xirta dhammaan hay'adaha maaliyadeed ee Maraykanka. Shabakadda ACH waxay u dhaqantaa sidii xarun dhexe oo wax lagu nadiifiyo dhamaan macaamiisha wareejinta maalgalinta ee Maraykanka (EFT), sida lacagta tooska ah, lacagaha elektarooniga ah, iyo bixinta kaadhka debitka.
Si aad u qorto nidaamka lacag bixinta cusub, fadlan buuxi Heshiiska Ruqsadda ee Lacagta tooska ah ee Lacag-bixinta ee hoose. Waxaad foomka u diri kartaa dukumeentiga xisaabinta ee Xafiiska Aasaasiga. Haddii aad doorbideyso, waxaad foomka oo dhammeystiran u diri kartaa dukumiintiga buuxinta 612.332.3833.
Adigoo gudbinaya xogtan, waxaad ogolaatay inaad u oggolaato Hay'adda McKnight Foundation in ay bixiso lacagtaada si elektaroonik ah. Haddii talooyinka bangigaaga isbeddelayo wakhti kasta, fadlan hubi inaad noo sheegto. Fadlan hubso in macluumaadka bangigaaga la ilaalin doono loona haysto meel amaan ah.
Su'aalaha ku saabsan lacagaha elektaroonigga ah, fadlan tixraac Su'aalaha Badanaa La Is Weydiiyo (FAQ) hoosta. Anigu waxaan qabaa su'aalo dheeraad ah ama faallooyin, fadlan la xiriir toosiyaha kantaroolaha, Therese Casey, si toos ah accounting@mcknight.org. Iyadoo marxaladan lacageed ee hore loo socdo, waxaan si daacadnimo ah uga mahad celinaynaa iskaashigaaga iyo soo dhawee wixii jawaab celin ah si aan u hagaajino adeegga.
Foomamka iyo Waraaqaha
Heshiiska ruqsadda ee keydinta tooska ah ee dhaqaalaha (PDF, 100 KB)
Su'aalaha: Xawilaadda Elektronikada (PDF, 78 KB)
Foomka W-9 (PDF, 120 KB)